Izahay dia ny mpitarika ao amin'ny teknolojia orinasa, zava-baovao sy ny fanao famolavolana. An'arivony no nifidy antsika mpanjifa manerana izao tontolo izao. TouchDisplays miasa miaraka ISO9001 [2000 dikan-] ny rafitra fitantanana sy taona, FCC, ROHS, ary isan-karazany iraisam-pirenena hafa certifications! Rehetra manerana ny dingana; fampandrosoana [R & D], rafitra fampiharana famolavolana, famokarana, fanaraha-maso ny kalitao, orinasa mpamokatra entana, fitaovana, ny faritra ary rehefa varotra tolotra asa fanompoana no nanome ny TouchDisplays rehetra mba ahazoana antoka ny fitohizan'ny sy ny orinasa rehetra ny fampisehoana mpanjifa.
TouchDisplays, ny mpitarika ao amin'ny teknolojia sy ny fanavaozana miezaka ny hanome endrika ambony indrindra customization hitondra vahaolana tandrify hihaona mpanjifa tinady.
UK Sampana lavorary izay kasainao.